Qoor Qoor oo kulan xasaasi ah la qaatay xildhibaanada BF ee laga soo doortay Galmudug | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Qoor Qoor oo kulan xasaasi ah la qaatay xildhibaanada BF ee laga...
Qoor Qoor oo kulan xasaasi ah la qaatay xildhibaanada BF ee laga soo doortay Galmudug
Madaxweynaha maamulka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye ayaa Hoyga uu ka deganyahay Magaalada Muqdisho casuumaad ugu sameeyay xubnaha labada Gole ee Barlamaanka JFS ee laga soo doorto Galmudug .
Kulankan waxa kasoo qeybgalay guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Aqalka Sare Mudane Abshir Maxamed Axmed Bukhaari, guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad iyo dhammaan Xildhibaanada Galmudug laga soo doorto.
Madaxweynaha ayaa ugu horreyn u mahadceliyay dhamaan intii kasoo qeyb gashay asagoona si kooban uga warbixiyay Galmudugta cusub waxyaabihii u qabsoomay iyo qorsheyaasha mustaqbalka dhaw uga degsan arrimaha horumarinta dhaqaalaha, amniga iyo dib uheshiisiinta.
Guddoonka iyo xubnaha labada aqal ee kasoo qeyb galay casuumaadda ayaa ugu danbeyntii ka mahadceliyay casho sharafta madaxweynuhu ku casuumay, ayagoona soo boggaadiyay dadaalada Horumarineed ee ka socda Galmudug.
Maqaal horeSawirro: Guddoomiye Cumar Filish oo xarigga ka jaray Kawaan cusub
Maqaal XigaHowlgal qorsheysan oo lagu dilay horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab